စေ◌ြးဝ◌ယျရငျး ဇိမျကမြယျ့နရော လေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » စေ◌ြးဝ◌ယျရငျး ဇိမျကမြယျ့နရော လေး
စေ◌ြးဝ◌ယျရငျး ဇိမျကမြယျ့နရော လေး
Posted by Mon Lay on Jul 17, 2020 in Local Guides, Photography, Travel |0comments
ကဲ..ဒီတဈခါမှနျလေးက ရှော့ပငျထှကျရတာကွိုကျတဲ့သူတှအေတှကျရော..အထူးသဖွငျ့ gadget ပစ်စညျးလေးတှေ ကွိုကျနှဈသကျတဲ့သူတှအေတှကျ ဖုနျးနဲ့သကျဆိုငျနဲ့ ကိရိယာတနျဆာပလာ တှကေို တဈနရောထဲမှာ စုံပလီစိနအေောငျ ဝ◌ယျလို့ရတဲ့အပွငျ ဇိမျကကြနြဲ့ ကောျဖီထိုငျသောကျ လို့ရမယျ့ နရောလေးတဈနရောကို ညှနျးပေးခငြျပါတယျ။
သူလေးကတော့ Remax ပါ။ အားလုံးသိပွီးသားနမှောပါ။ Remax ဆိုငျတှထေဲမှာ အကွီးဆုံးပါ။ အခုသူက လှညျးတနျးအငျးစိနျလမျးမပေါျမှာ ဆိုငျသဈဖှငျ့လိုကျပွီလေ။ အရငျ MGOU နရောမှာ။ ဦးထှနျးလငျးခွံလမျးအကြောျလေးတငျ။
သူ့ပစ်စညျးလေးတှကေ သုံးလို့လညျးကောငျးတယျ။ warranty လညျးပါတော့ ကိုျယျတှေ အကွိုကျပေါ့။ မှနျလေးက စကျပစ်စညျးနဲ့ အကြိုးမပေးဘူး။ Remax သုံးကွညျ့မှ တောျတေျာလေးအဆငျပွနေတေယျ။ နားကွပျကွိုးကအစ အားသှငျးကွိုးထိအဆုံး။
အံမယျ..အဲ့gadget တှပေဲရောငျးတယျမထငျနဲ့နောျ..တခွားထီးတို့ အိတျတို့ ခရီးဆောငျအိတျပါရောငျးသေး တာ။ ဒါ့အပွငျ သူကအခု ဘယျလောကျဇိမျကွသလဲဆိုရငျ သူမြားနဲ့မတူ စေ◌ြးဝ◌ယျထှကျရငျး. .နားနားနနေေ ကောျဖီထိုငျသောကျဖို့ နရောပါရှိ သေးတာ။ ကဲ..ဒီတော့ မှနျလေးက နားကွပျလေး ဝ◌ယျ တယျ. .ပွီးတော့ သီခငြျးနားထောငျပွီး Matcha Latte ကောျဖီကို ဇိမျနဲ့ထိုငျသောကျ နခေဲ့တာပေါ့ကှယျ။ ကောျဖီထိုငျသောကျလို့ရတဲ့ နရောကလညျး ကိုယျတှေ Travel blogger တှအေကွိုကျကိုလုပျထားသလိုလို..ကမ်ဘာလုံးနဲ့ ကမ်ဘာ့မွပေုံနဲ့..ဒီတော့ ကောျဖီသောကျရငျး စိတျကူးနဲ့ကမ်ဘာပါပတျခဲ့လိုကျတယျ။
အခုဆိုရငျ Promotion အနနေဲ့ ဇူလိုငျလ ၂ဝ ရကျနေ့အထိ ဝယျသူတိုငျးကို ကောျဖီအလကားတိုကျပါတယျနောျ ပွီးတော့ ၃၀၀၀ဝ ကြောျဖိုးဝယျရငျ Fortune Wheel လှညျ့ပွီး ကံစမျးခှငျ့ရှိတယျ။ ၅ သောငျးအထကျ ဆိုရင Starbucks ကောျဖီ လကျဆောငျပေး တယျလေ။
အမွနျကလေး သှားပွီး စေ◌ြးဝ◌ယျရငျး ဇိမျခံခဲ့ကွနောျ။
နောကျလညျးဆိုငျလှလှလေးတှသှေားပွီးဆကျရေးပေးပါဦးမယျ..အားပေးဖတျရှုပေးကွပါဦးနောျ#Remax #phoneaccessories #gadget #coffeeshop #yangon#hledan#review